I-urticaria ebonakalayo ezenzekelayo - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Ikhaya>Amafomu e-Urticaria>I-urticaria enamandla kakhulu
I-urticaria enamandla kakhuluIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-07-01T12:51:49+02:00
Ngenhlanhla, okuvame kakhulu uhlobo urticaria yi-acute urticaria noma i- "acute urticaria urticaria", ethatha okungenani amasonto ayisithupha (imvamisa izinsuku ezimbalwa kuya kwamasonto amathathu) futhi ngokuvamile kulula ukuselapha. Cishe umuntu oyedwa kwabahlanu unesiqephu esinjalo okungenani kanye empilweni yakhe noma empilweni yakhe.
Okujwayelekile izimpawu, ububomvu kanye nesifuba, kwenzeka. Amavili abangela ukulunywa okukhulu futhi kwesinye isikhathi ahlotshaniswa nokushisa nokuqaqamba kwesikhumba. Kwezinye iziguli, i-angioedema (ukuvuvukala kwesikhumba esijulile) nayo iyenzeka. I-urticaria enamandla kakhulu engahle ihambisane nomkhuhlane, ikhanda, isifo sohudo, ubunzima bokuphefumula nokugwinya, ubuhlungu bamalunga, nokukhathala / ukukhathala.
Izimbangela ze-urticaria ebucayi zivame ukutheleleka okufana nemikhuhlane. Kubantu abadala, imishanguzo ethile, ikakhulukazi i-antipyretic analgesics (i-aspirin, i-diclofenac, ibuprofen), ama-antibiotics (i-sulfonamides, i-penicillin, i-cephalosporins) kanye nemithi yenhliziyo kanye ne-antihypertensive (i-beta-blockers, i-ACE inhibitors, i-diuretics) ingadala ukuhlaselwa. Futhi, okunye ukungezwani komzimba, njengokungezwani nokudla, kungadala izimpawu ze-urticaria; noma kunjalo, lezi akuzona izimo ze-urticaria yangempela. Ama-detergents nemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu (ama-shampoos, ama-gels eshawa, noma okhilimu) cishe azikaze zibangele i-urticaria ebukhali.
Izimpawu zivame ukunyamalala zodwa zingakapheli izinsuku ezimbalwa. Le ndlela yokwelapha iqukethe nje ama-antihistamine, okungukuthi lawo esizukulwane esisha, okubizwa ngokuthi yi-non-sedating, okusho ukuthi akwenzi ukulala, ama-antihistamine.
Ama-antihistamine — abuye abizwe ngokuthi ama-H1 blocker - yizidakamizwa ezivimbela umphumela we-histamine ngokuzihlanganisa nama-histamine receptors futhi awavimbele. Iseli eliphethe i-receptor (isb. Iseli lezinzwa) alizitholi izimpawu ze-histamine ngakho-ke aliphenduli. Kodwa-ke, ukubopha akuhlali unomphela. Ngakho-ke, le mithi kufanele iphuzwe kaninginingi.
Uma i-urticaria inganyamalali, noma iqhubeka ibuya, udokotela nesiguli bazoqala ukuxilongwa okuningiliziwe ngemuva kwamasonto ambalwa.
Uma i-urticaria ebukhali inzima futhi ngokwesibonelo ihambisana ne-angioedema, ubunzima bokugwinya, noma ubunzima bokuphefumula, kusetshenziswa eminye imishanguzo (njenge-cortisone).
Vele, izimbangela ezisolwayo kufanele zigwenywe ngangokunokwenzeka, ngokuzayo.